Homeअन्तरवार्तालिपुलेकको विषयमा भारत र चीन पहिल्यै देखि मिलेका थिए – पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महत
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महत लिपुलेक हुँदै भारतले चीनसँगको व्यापार मार्ग खोलेकोमा आ,पत्ति व्यक्त गर्छन् । यो मामलामा पाँच वर्ष अघि नै सम्झौता भएको खुलाउँदै सरकारले कु,टनीतिक दबाब सृजना गरी देशको भूभागमा आँच आउन दिन नहुने बताएका छन् । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका डा. रामशरण महतसँग एनआरएन रेडियोको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलासँग गरेको कुराकानीको छोटो अंशः
हिजो भारतका र,क्षा मन्त्रीले त लिपुलेकहुँदै भारतको मानसरोबर जाने बाटो उद्घाटन गरेको छ नि ?
त्यो त नेपालको भूमि हो । त्यसमा केही शं,का नै छैन । चीन र भारतको बीचमा आजभन्दा चार, पाँच वर्ष अगाडिदेखि सम्झौता भएको चर्चाहरु चलिरहेका छन् ।
त्यहाँ त भारतले सडक बनाइसक्यो नि ?
पाँच वर्ष अगाडि नै चीन र भारतबीच त्यहाँ बाटो खोल्न सम्झौता भएको छ । त्यसैबेला हामीले आ,पत्ति गरेका थियौं । म आफैले पनि भारतसँग आ,पत्ति प्र,कट गरेको थिएँ । त्यही अनुसार उनीहरुले बाटो खोलेका हुन् । त्यसरी बाटो खोल्नका लागि जसरी चीन र भारतले सम्झौता गरे त्यही बेलामा हामीले आ,पत्ति प्र,कट गरेका हौं । त्यो नेपालको भूमि हो । त्यसपछिका सरकारले ध्यान दिएर कुरा उठाएनन् । जब ५, ६ महिना अगाडि भारतबाट नक्सा आयो अनि मात्रै यो भूभागका बारेमा वि,वाद आएको हो । कालापानीदेखि लिपुलेक हुँदै परैसम्मको भूमि नेपालको हो ।
त्यतिखेर चिनीयाँ राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्री मिलेर हस्ताक्षर गरेका होइनन्, अनि कसरी नेपालको भूमि हुन्छ ?
त्यो त चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्री मिलेर हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
हामीले नेपालको भूमि भन्दाभन्दै भारतले आफ्नो हो भनेर सडक पनि निर्माण गरिसक्यो नि ?
यो कुरा उनीहरुले पहिलादेखि नै दा,बी गरेका हुन् । उनीहरुको नक्सामा पहिलादेखि नै थियो । खासगरी नेपाल र भारतको भू–भाग छु,ट्ट्याउने महाकाली नदी हो । महाकालीको पश्चिम भाग भारतको हो र पूर्वी भाग नेपालको हो । हामी त्यो महाकाली नदी भन्छांै । उनीहरुले त्यो महाकाली नदीलाई एउटा कृत्तिम खोल्सा तानेर महाकाली त्यो हो भनेर लिपुलेकलाई पनि आफूतिर तानेर उनीहरुले पहिलादेखि ग,ल्ती गरेका हुन् । यो धेरै अगाडिदेखिको कुरा हो ।
यतिबेला भारतले नेपालको भूमिमा बाटो खोलिसकेको छ अब नेपाल सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
यसमा त नेपाल सरकारले तुरुन्त आपत्ति जनाउनुपर्यो । ‘यो नेपालको भू–भाग हो, तिमीहरुले आपसमा नेपालसँग सल्लाह नगरीकन किन यो गर्यौ’ भनेर नेपालले आफ्नो पोजिसन बनाउनुपर्छ । हिजो जसरी पोजिसन लिएको थियो त्यसैगरी पोजिसन लिएर गम्भीर रुपले वार्ता गर्नुपर्छ ।
भारत र चीनले सम्झौता गर्दा त्यतिबेला नेपाल सरकार बोलेन नि ? किन बोलेन ? तपाईंलाई थाहा छैन ? जसरी बोल्नुपथ्र्यो त्यसरी बोल्नुभएन छ, तपाईंले पनि झारा टार्ने काम गर्नुभएछ नि ?
स्वयंम प्रधानमन्त्री त्यतिबेला सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो । उहाँले तुरुन्तै आ,पत्ति प्र,कट गर्नुभयो । त्यसबेला म आफै हिन्दूस्तान गएको थिएँ । भू–कम्पपछि भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई निमन्त्रणा गर्न । त्यसबेला मैले उहाँसँग कुरा उठाएको थिएँ । यहाँका परराष्ट्र सचिवहरु मलाई भेट्न आउनुभएको थियो उहाँसँग दरिलो ढंगले मैले यो विषय उठाएको थिएँ । उहाँहरुसँग मैले हाम्रो सीमानाका बारेमा धेरै विवाद छ । त्यसलाई छिट्टै बसेर छलफल गरौं भनेर ।
हामीले लिपुलेकको कुरा यसमा भारत र चीन त मिले नि ?
हो त यो विषयमा उनीहरु धेरै पहिलादेखि मिलेका थिए । चीनले पनि नेपाललाई सोध्नुपर्छ भनेर कुरा राख्नुपथ्र्यो ।
लिपुलेकको बारेमा त चीनले नेपाललाई पनि साथ दिएन नि ?
हो, चिनले पनि साथ दिनुपथ्र्यो । भारतले पनि साथ दिनुपथ्र्यो । त्यसलाई हामीले उठाइराखेका छौं ।
नेपालले अब कसरी कुटनीतिक रुपमा पहल गर्ने त ?
कसरी गर्ने भनेर भाषणा दिएर होइन । आफ्नो दह्रो पोजिसन कायम गर्नुपर्छ । त्यसमा त स्पष्टै छ नि, ‘यो नेपालको जमीन हो, यहाँहरुले गल्ती गर्नुभएको छ’ भनेर आपसमा बसेर यसलाई तु,रुन्त सुधार गर्नुप¥यो । नेपाल र भारतको सीमाना तुरुन्त टुं,ग्याउनुप¥यो भनेर आ,पत्ति प्र,कट गर्नुपर्छ ।
propecia hair regrowth – http://finasteridepls.com/ buy brand name propecia online
buy propecia – how much does propecia cost at cvs how does finasteride work
tadalafil 10 mg – online pharmacy tadalafil 20mg tadalafil5mg
research paper editing – term papers for sale how to write an essay about my life
Zkcqpb – Price check 50mg viagra sildenafil coupon
Kbnrjs – ivermectin tablets order Sdxvru bssldp